Ibhanti Lentshukumo yase-Limpopo
Ngokwakheka komhlaba, i-Mapungubwe ihleli pha kumlambo ophakathi kwamatye amabini e-granite (indawo enkulu eneqweqwe elizinzileyo). Lomxinzelelelo ubizwa ngokuba ‘Libhanti lentshukumo yase-Limpopo’. Pha kwizigidi zeminyaka eyi 250, iqweqwe lomhlaba laqala lasuka lisiya ngasebhantini futhi ilitye elityhidiweyo lashovelwa ngaphakathi ngenxa yokuqhekeka kwamatye entlabathi.
Lonto ikhuphe amatye amnyama we-dolerite, futhi xasele amatye wentlabathi atshabalale, i-dolerite enzima iye yashiyeka isenza imiphetho eqhelekileyo ngokwesimo. Ukusuka kumntla wentaba yase-Mapungubwe ubona cacileyo umzekelo ogciniweyo, onqumla phakathi kwembonakalo yomhlaba njengomgca obukhali omnyama. Abantu abaninzi bacinga ukuba indawo yamanzi ludonga olwenziwe ngabahlali base Mapungubwe.
Kodwa kwakukhona impilo pha kumlambo wase Limpopo kwizigidi zeminyaka phambi kokuba kufike abantu. I-Fosili ze-Dayinaso ukusuka pha kwizigidi zeminyaka eyi 200, zade funywanwa. Enye izinto ezimangalisayo zomhlaba ziquka ifosili zezityalo zeentyatyambo, izinambuzane kunye neziduli. Uhambo lwe-dayinaso luthe lwabonakala, lubhaleke phantsi kumatye oodake. Nangona kungekho ifosili ezifunyenweyo, izixhobo zabantu bamandulo kwindawo zabo zokuhlala, zibonakala kuyo yonke ipaki yelizwe i-Mapungubwe. Ekutsheni nje, abazobi bamatye bamandulo, njenga bantu be-San, baye baqaba amatye ngemidwebo ukuya nase zindongeni zemiqolomba pha ecaleni kwentaba yase Leokwe.